» Qeybtii Lixaad Habka ugu haboon ee doorashada lamaanahaaga Iyo Marwada Wanaagsan “Taxanaha Qoyska”…
Qeybtii Lixaad Habka ugu haboon ee doorashada lamaanahaaga Iyo Marwada Wanaagsan “Taxanaha Qoyska”…
Jul 21, 2013 - jawaab	ShareGaadasho mise guri ka guursi
Waxaan halkaan ula jeedaa ma waxaa haboon in aad guursato gabar aad qaraabo tihiin ama isku beel hoose tihiin mise gabar xoogaa kaa fog oo kasoo jeeda beelaha kale?
Soomaalidu barigii hore ma guursan jirin qaraabada hadase waxaa badan in qofku gudaha beeshiisa iyo qaraabada wax ka doonto.
Gabadha wanaagsan oo leh sifaha aan soo tilmaanay labadaba way noqon kartaa. laakiin dood dheer baa ka taagan labadaas qaybood ka sii wanaagsan.
Doodi waxay leedahay :-
· Inaad ka guursato dadka kaa fog waxay kuu abuuraysaa xidid iyo qaraabo cusub waxayna kuu furaysaa albaab awal kaa xirnaa laakiin hadaad xaafadaada ka kaluumaysato waxba maadan soo kororsan.
· Xididnimo iyo xushmo dheeraada ayaa idin dhex maraysa qolada cusub laakiin qaraabada waxaasi ma jiraan oo seedigaa wuxuu kuu arkaa ina adeerkiis.
· Ilmahaagu waxay yeelanayaan abtiyaal aan ahayn adeeradood.
· Gabadhu waa safiir isku xira labo beelood qayb wayn bayna ka qaadan kartaa isku xirnaanta bulshada.
· Dhiigaga kala fog waxay ka hortagaan cuduro badan oo looga baqo dadka ay iska dhalaan qaraabadu.
· Waxaan anigu ku kabayaa qoladaan qiso uu nooga sheekeeyey nin oday ah oo ahayd (( anoo dhalin yaro ah ayaa waxaa la dilay nin walaalkay ah labadii reer waxay ku heshiiyeey mag iyo gabar godob tir ah oo la dhalatay ninkii wax dilay oo lagu daray nin walaalkay ah laakiin aniga waxaa ii qarsoonaa inaan dilo ninkii walaalkay dilay ama walaaladiis mid kamida goor hawshaasi ii dhawdhawdahay oon rabo inaan falkii fuliyo ayaa la iisoo sheegay gabadhii wiil bay dhashay kolkaasaan aad ugu farxay kadibna waxaan is iri oo ma wiilka aad adeerka u tahay abtigiis ayaad dilaysaa go,aankaygiina halkaasaan uga tanaasulay)).
Dooda kale waxay leedahay:-
· Kolay hadaad guursanayso maad u qaraabo kiishid mida kula dhalatay oo dayacan maxaa kaa galay gabdhaha islaameed tanaa ceebteedu kuu taalaaye.
· Qaraabadu way jecel yihiin reerkaan maxaa yeelay oo waxay yiraahdaan ((waa walaalkay iyo walaashay midna ka qaloon mayo)).
· Hadii wax si kaa noqdaan gabadhaani waa ku garab istaagaysaa oo waa walaashaa oo kaa cad goosan mayso.
· Markaad doonaysid kaagama baahna baarbaaris badan oo xogteeda ayadoo faahfaahsan baad haysaa.
· Ana waxaan ugu kabayaa qoladaan nabi Max,ed NNKH ha ahaatee gabadhiisii faadumo RC oo uu aad u jeclaa wuxuu siiyey ina adeerkiis Cali Bini Abii Daalib RC.
Marka laga sootago labadaas doodood waxaan ku baraarujin lahaa ninkii ay noqoto inuu guursado gabar adeerkiis dhalay ama abtigiis ama inta la siman waa inuu aad u taxadaraa una sabraa maxaa yeelay waxay keeni kartaa markii labadaas qof kala tagaan ama is xumaansadaan in qaraabadii ay saamayso ama ay kala fogaadaan dadka xigtada ah waana khatar!!!!!!.
Beena waa lagu xero galiyaa Runa waa lagu dhaqaa
Waa maahmaah aad u khaldan qayb wayna ka qaadatay marin habaabinta dhalinta soomaaliyeed. Ayadoo sideedaba beentu xaaraan tahay ayaa hadana arintani waxay abuurtaa mushkilad la kowsata asaaska qoyska curdinka ah waxayna abuurtaa kalsooni daro balaaran.
Ogaada marka ugu horaysa oo reerka la dhiso qof walba gaarkiisuu uu welwelsan yahay, asagoo ka baqaya inuu qofka kale ku xumaado ugu yaraan lix bilood bay qaadataa in la dhiso kalsooni dhab ah. Hadaba xaalku see noqonayaa markii gabadhii ay u cadaato in saygeedii khiyaamay oo been u sheegay waxaan dhihi karaa waa burbur qofkuna maahan inuu mushkilada asagu gacantiisa ku samaysto.
Dhalinta inta badan waxaa arintaan ku xanbaara ayagoo is leh kusoo jiido gabadha, halka qaar kalena ay ka baqayaan inay diido. Laakiin ogow hadii gabadhaan aad heshiin waydaan in gabdhuhu badan yihiin lagana yaabo inaad hesho mid kaaga fiican oo sidaada kugu rabta. Anigu waxaaban ku talin lahaa inaad wax la harto oo aadan wada sheegin waxa aad haysato ha ahaadeen dhaqaalo ama fursado kale oo hadhow markay marwadaadu ogaato ay hesho kalsooni dheeraad ah. Nabiguna NNKH wuxuu yiri ((shardi waxaa ugu mudan in la fuliyo midkii aad ku banaysateen (ku guursateen) gabar muslima )).
Istikhaaradu waa muhiim
Waa salaad iyo duco ay mudan tahay inaan laga tagin xiliga aad go’aanka guurka qaadanayso ducadaas oo Allaah looga baryayo inuu ku waafajiyo sida sawaabka(toosan) ah.
Waa calaamad lagu yaqaan qofka mu,minka ah oo allaah ku xiran waxaan warkeeda hayaa in wiil dhalin yaro ah ay gabar guur ku heshiiyeen , gabadhaas wuxuu ku doortay diin iyo toosnaan ay waliba daaciyad ku tahay oo diinta faafisa ma uusan ka dalban inuu wajigeeda arko. Wiilkii markuu reerkoodii u sheegay inuu guursanayo ayaa hareeraha waxaa ka galay gabdho walaalihiis ah iyo hooyadii ayagoo u sheegaya inaysan u cuntamin gabadhaasi ceebo badana ka sheegay. Inkastoo uu murugooday hadana waa is adkeeyey oo wuxuu ugu jawaabay anigu gabadha diin baan ku doortay ee mahaysaan ceeb xaga diinteeda ah? maya ayey ku jawaabeen.
Asagoo aad u walbahaarsan ayuu isku dayey inuu seexdo habeenkaas, laakiin hurdo way kasoo dhici wayday oo hadba waxaa hor imaanayey hadaladii hooyadii iyo walaalihiis dhinaca kalena gabadhii uu ku yiri diinta aad ku caanbaxday darteed baan kugu guursanayaa inuu waxyaalo kale uga tago way ku adkaatay , saq dhehe ayuu go,aansaday inuu allaah baryo oo istikhaaraysto ducadii iyo salaadii kadib markiiba wuu gam,ay wuxuu arkay riyo qurux badan wuxuuna kusoo toosay xasiloonaan ka duwan welwelkii oo xalay ka seexan waayey sidaasuuna gabadhii ku guursaday, reerkiina waa baraaray allaahna waa isku liibaanay 20sano ku dhow ayuuna dhisan yahay hadda.
« Warbixinta Ka HoreysayAniga Iyo Ninkeeyga Xanaaqeena Waa Joogta Hadaba Sidee Ayaan Iskaga Yareyn Karnaa.	Warbixinta Xigto »Maxaad Ka Ogtahay Saameyn Intee La Eg Ayey Tiknooljiyadu Ku leedahay Aadanaha.	Leave a Reply Cancel reply